Ruqsadaha Waxbarashada ee AutoCAD - Geofumadas
Sebtember, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS
Barashada qalab kombuyuutar ah ayaa maalin kasta fudaydinaysa, casharo buuxda ee AutoCAD Online, blogs, forumyada iyo beelaha isticmaala waxay ku dhow yihiin inay bartaan hab isku mid ah.
Si aad u bartid AutoCAD ma'aha lagama maarmaan inaad haysato liisanka sharci darrada ah, ujeeddooyinkan waxaa jira noocyo waxbarasho oo ka madaxbanaan AutoDesk, si buuxda u shaqeynaya. Waqtiyada kale waxay suurogal u tahay keliya Maraykanka, Kanada iyo qaar ka mid ah wadamada Yurub; laakiin hadda waxay heli karaan ku dhawaad ​​dhul kasta oo ay ku jiraan Latin America (iyada oo ka reeban, meelaha qaarkoodna lagu ciqaabi karo sharciyada hantida khabiirka ah ama la'aanta wakiilka ganacsiga ee AutoDesk).
Qalabka waxaa ka mid ah alaabooyinka:
AutoCAD P iyo ID
AutoCAD Faahfaahin Dhisme
Autodesk Green Studio Studio
Autodesk Navisworks Maamul
Autodesk Quantity Quantity
Xirfadlaha Falanqaynta Dhismayaasha Autodesk Robot
Qalabka Autodesk ee Mac OS X
La-taliyaha Autodesk Moldflow Advanced
Sida loo soo dejiyo AutoCAD
Si aad u soo dejiso ruqsadaha waxbarasho ee AutoCAD waa inaad tagtaa:
Ka dibna gali user user diiwaan, ama iska diiwaan markii ugu horeysay. Nidaamku wuxuu na waydiisanayaa macluumaadka sida da'da, jaamacada aan wax ku baranayno, sanadka aan ka qalinjabineyno kadibna waxaan helnaa email si aan u xaqiijino.
Taas ka dib, barnaamijka, luuqada, nidaamka hawlgalka ayaa la xushay, haddii ay tahay xitaa 32 ama 64 kadibna ... sug, sababtoo ah faylasha inta badan waxay marayaan 3 GB. Waan arki doonaa koodhka lagu soo bandhigay casaan, lambarka taxanaha iyo furaha dhaqdhaqaaqa, iyadoon macluumaadkaan liisanka la soo dejiyey kaliya waxay noqon doonaan tijaabo ah 30 maalmood.
Marka la rakibo, waxaa la weydiistaa xogta ku-meel-gaarka ah. Xogtan waxaa lagala tashan karaa profile, labadaba Serial iyo Product Key.
Ruqsadaha waxbarashadu ma qaban karaan
Noocyada waxbarashada ee AutoDesk waxay si buuxda u shaqeynayaan, ujeedooyin waxbarasho. Shaqooyinka lagu sameeyay qaybaha kala duwan waxay leeyihiin watermark ee qaabeynta daabacaadda, taas oo sheegaysa in lagu sameeyey qaab waxbarasho.
Looma oggola inay u adeegsadaan ujeedo ganacsi, ama aan siin karno koorsooyin xarun wax lagu baro, loomana kordhin karo liisanka buuxa.
Kama bixin kartid lacag bixinta sanadlaha ah ee ruqsadahaas, waxay haystaan ​​mudo sadex sano ah (bilooyin 36) laga soo bilaabo taariikhda soo dejinta.
Waxay sidoo kale ku fiican yihiin kuwa ku qoran internetka, oo aan u isticmaalin ruqsadaha sharcidarrada ah, wax yar ka sii kordhin karaan dhaqankooda.
Sida loo jabiyo AutoCAD
Haddii ay tahay inay bartaan AutoCAD, kor ku xusan waa ku filan. Markaan dhameyno shahaadada, ma aha wax macno leh in la isticmaalo liisanka sharcidarrada ah, gaar ahaan haddii macallimiin 64 oo na siiyay fasalo kala duwan ee Jaamacadda ay ku bixiyeen ugu yaraan lacagta lagu bixiyo si aan u fahamno waxa xirfadlaha ah.
Waxaa jira sharci aan laga saari karin nolosha adduunyada, oo ah waxa aynu beeranayno, ka dibna waanu gooshi doonaa. Sidaa darteed haddii aynaan rabin naqshadeennadayadu in ay nasoo dhigaan hal maalin ama ay naga ciyaaraan wasakhaha wasakhda nagu filan xilliga qandaraaska, waa inaan ku darsannaa daacadnimo ku saabsan sharciyada hantida cilmiga leh.
Iyada oo arrimahan oo dhan ah, ka hor intaan caqli-gal ahayn in burcad-badeednimadu ...
Haddii aad doonayso inaad sameysid shirkad ama badeecad ganacsi gaar ah oo bixisa adeegyo, waxaa ugu fiican inaad iibsato liisanka AutoCAD LT si aad u bilowdo. Kharashkani wuxuu ku saabsan yahay $ US $ 1,000, kaas oo lagu daboolay shaqo bilaash ah oo mushaar ah. Ma jiraan wax xayndaab ah oo ku saabsan hantida hantida qalaad, oo waxay kaa helayaan software sharci ah, oo aadan xitaa isticmaalin.
Haddii aad rabto inaad xafiddo chips, si fiican waxaa jira IntelliCAD, oo ah sida AutoCAD, oo leh qiime ka badan US $ 400. Haddii aad rabto inad wax yar qaadato, waxaa jira barnaamijka Furan ee furan, inkasta oo aanad waxba samayn karin (ugu yaraan CAD).
Haddii aadan rabin in aad ku iibsato dukumiinti, markaas waa inaad iska hubisaa haddii aan dhab ahaantii doonno in aan ganacsade nahay, sababtoo ah ganacsigu waa maalgalin joogto ah ee xirfadaha (degaanka, qalabka, gawaarida, shaqaalaha, software, tababarka) iyo iibinta badeecada ama adeegga oo ah qaab qiimo leh oo macmiilku ka helayo awooddeena.
Post Previous«Previous Koorso ku saabsan suuqyada aan rasmiga ahayn iyo habaynta
Post Next GGL luqadda geoprocessing heli karaa gvSIGNext »
3 Jawaabo "Luqadaha Waxbarashada AutoCAD"
samuel samuel isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay danahaaga, ma iibinayno software, laakiin waxaad si toos ah ula xiriiri kartaa AutoDesk ama Studica
Elena gutierrez isagu wuxuu leeyahay:
ixtiraamka wanaagsan ee aad iigu soo diri karto iimayl, waxaan u adeegsanayaa tixraaca barnaamijyada autocad ee ugu dambeeyay ruqsadaha tacliinta